धक्का, कष्टप्रद, विवादास्पद बच्चाहरु को सामाजिक व्यवहार कसरी बढाउने
बच्चाहरु साना अहंकार हुन्?
बच्चाहरूको सामाजिक व्यवहारले अरूसँग सम्पर्कमा मात्र सफल हुन्छ
राम्रो व्यवहार - अझै शिक्षामा एक महत्त्वपूर्ण विषय?
छोराछोरीको सामाजिक व्यवहार र सामाजिक सशक्तताहरूलाई बलियो बनाउनुहोस् - के महत्त्वपूर्ण छ?
सामाजिक कौशल एक कौशल हो कि बच्चाहरु लाई पहिलो सिक्नु पर्छ। कुनै पनि मानव जाति सामाजिक रूपमा जन्मिएको छैन, त्यसैले सकारात्मक सामाजिक व्यवहारको संचार र मांग सोमाकरण र शिक्षा प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण भाग हो। बच्चाहरु को सामाजिक व्यवहार आमाबाबु र बच्चाहरु को सामाजिक वातावरण द्वारा प्रभावित छ।
धक्का, कष्टप्रद, विवादास्पद? छोराछोरीको सामाजिक व्यवहार कसरी बढाउने
हाम्रो समाजमा एक सामाजिक र रचनात्मक सहयोग चाहिएको छ। हरेक व्यक्ति न केवल कानूनों तर मानदण्डहरू र मानहरूसँग पनि अनुपालन गर्न अपेक्षा गरिन्छ।
बच्चाहरु र सामाजिक कौशल को सामाजिक व्यवहार जान्न सकिन्छ
यदि तपाईं छैन भने, तपाईंसँग अन्य मानिसहरूलाई सामना गर्न समस्या छ र तपाईं छिट्टै बाहिर आउनु हुन्छ।
त्यसैले, यो तपाईंको लागि एक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक लक्ष्य हुनुपर्छ आमाबाबुको रूपमा तपाईंको बच्चालाई सामाजिक अन्तरक्रियाको आधारभूत नियमहरू सिकाउने। पछि, तपाईंलाई यो कार्यमा सहयोग पुर्याउनेछ जस्तै कि किबोर्डगार्टन र स्कूलहरू।
पहिलोमा, शिशु र बच्चाहरू मात्र आफैले फिक्सित छन्। तिनीहरू एक चालक तरिकामा प्रतिक्रिया र उनीहरूको आवश्यकताहरूलाई रिसेट गर्न सक्दैन। यस सन्दर्भ मा, शिक्षकों र समाजशास्त्रीहरु बच्चाहरु जस्तै उदासवाद बोल्छन।
बच्चाहरूका लागि, संसार आफैं घेरिएको छ। तर यो स्वार्थ संग केहि गर्न छैन: एक सानो बच्चा अझै सम्म अरूको आवश्यकताहरु पहिचान गर्न र तदनुसार व्यवहार गर्न सिकेको छैन। यसको अतिरिक्त, यो अझै सम्म यसको आफ्नै कार्यहरू र तिनीहरूको नतिजाहरू प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि, एक दुई वर्षीय बच्चा प्रायः अनजान छैन कि त्यो वा त्यो अर्को गल्तीको दोषी छ। यो अझै पनि बुझ्न सकिदैन कि यसले उनको खेल साझेदारको दुखाइको कारण बनाउँछ। यस उमेरमा नैतिक अर्थमा एक अन्तस्करण अवस्थित छैन।
मुद्दाहरू बदल्नको लागि, तथ्य यो भाषा अझैसम्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामाजिक माध्यमको अन्तरक्रियाको रूपमा पर्याप्त रूपमा विकसित भएको छैन। शिक्षा, प्रगतिशील संज्ञानात्मक, भावनात्मक र सामाजिक विकास साथै अन्य बालबालिकाहरूसँग व्यवहार गर्न व्यक्तिगत अनुभवहरू र वयस्कहरूले तपाईंको बच्चालाई आफ्ना सामाजिक क्षमताहरू विस्तार गर्न मद्दत गर्छन्।
बच्चाहरु मा प्रयोग र अवलोकन साबित भएका छन् कि शुरुवात बचपन मा सामाजिक व्यवहार को जानी चाहिए।
बच्चाहरु को सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए
बालबालिका सामाजिक अलगावमा बढ्दै जान्छ यो सामाजिक शिक्षाको अनुभव र सम्पर्कको पछि लागी उनको विकासमा क्षतिपूर्ति गर्न गाह्रो छ।
यसैले, यो तपाईंको बच्चाको अन्य बच्चाहरु संग प्रारम्भिक संपर्क छ कि महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, एक प्ले समूहमा जानुहोस् वा नियमित रूपमा अनुकूल मित्रहरूसँग केहि गर्नुहोस्। तपाईंको बच्चाको लागि शिक्षा प्रभाव राम्रो छ र तपाईंसँग पनि अन्य आमाबाबुसँग कुराकानी गर्ने अवसर छ।
Crèches र kindergartens पनि सामाजिक व्यवहार को बढावा दिन को लागि एक महत्वपूर्ण योगदान गर्छन। तपाईंको बच्चाले त्यहाँ धेरै फरक बच्चाहरू भेट्नुहुन्छ र तिनीहरूका आवश्यकताहरूलाई अलग राख्न सिक्छ र रचनात्मक संघर्षहरू समाधान गर्दछ। यसकारण, तपाईंको बच्चालाई नियमित रूपमा हेरचाह सुविधामा ल्याउनुहोस् र शिक्षकहरूलाई घरमा अनुपालन गर्न आग्रह गरेर सामाजिक सञ्जाललाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नुहोस्।
अघिल्लो पीढीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक लक्ष्यहरू बीचमा असलता र असल आचरणहरू थिए। तर यी मूल्यहरू अझै अझ सान्दर्भिक छन्? हो, बच्चाहरूको सकारात्मक सामाजिक व्यवहार पहिले भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ।
तथ्य यो हो कि शिष्टाचारले अरूको आदरको अभिव्यक्ति पनि हो। यसबाहेक, सबैले दयालु व्यवहार गर्न चाहन्छन्। त्यसकारण, राम्रो अभिव्यक्ति अझै पनि एक विषय हो जब यो सामाजिक कल्याण र सामाजिक व्यवहारमा आउँछ।
यदि तपाईं राम्रो व्यवहारको मूल्य गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो बच्चालाई सुरू गर्न सक्नु हुन्छ। उनीहरूको व्यवहारको सन्दर्भमा, छोराछोरीहरू आफैलाई आमाबाबुलाई पहिला अभिवादन गर्छन्। "मोडेल द्वारा सिक्दै" शैक्षिक शब्दावलीमा प्रयोग गरिएको शब्द हो।
तपाईंको बच्चालाई शिष्टाचारका वाक्यांशहरू "कृपया" र "धन्यवाद" प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस् र आफैलाई सकेसम्म सम्भव गर्नुहोस्। पछि, तपाईं व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ किन यो पोष्ट र अनुकूल हुन महत्त्वपूर्ण छ। किनकि खेलको सामाजिक नियमहरू पछ्याउँदैन, यो टिक्न सक्नेछ। मित्रता, अर्कोतर्फ, बाढीहरू खोल्न सक्छ - दुवै पेशेवर र निजी।
सबै भन्दा माथि, बच्चाहरू आफैलाई र वयस्कों संग कसरी व्यवहार गर्ने भनेर जान्न आवश्यक छ। यसो गर्न, तिनीहरू पहिला धेरै नियमहरू आन्तरिक रूपमा राख्छन्, जस्तै सामाजिक आदर्श कि शारीरिक आक्रामकता वा चाहेको छैन। साना केटाकेटीहरूले यस नियमको अर्थ र उद्देश्य बुझ्दैनन् जबसम्म तिनीहरू उनीहरूको "पीडित" संग सहानुभूति गर्न सक्षम छैनन् र तिनीहरू आफैं पिट्ने चाहँदैनन् भन्ने महसुस गर्छन्।
मेरो बच्चाले चीजहरू ब्रेक गर्दा म कसरी व्यवहार गर्छु?
त्यसैले, यदि तपाईंको बच्चाले खिलौना बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, उदाहरणका लागि, आमा वा बुबाको रूपमा तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न र स्थितिलाई दुरुपयोग गर्न आवश्यक छ। तपाईंको बच्चालाई पर्खनुहोस् वा अर्को खिलौनामा भन्नुहोस्। पछि, तपाईंले आफ्नो बच्चालाई मौलिक रूपमा विवाद समाधान गर्न, समझौता खोज्न वा वयस्कों बाट मद्दत खोज्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
यदि तपाईंले सामाजिक अन्तरक्रियाको लागि नियमहरू सेट गर्नुभयो भने, तपाइँलाई पनि पालन गर्नुपर्दछ भनेर पक्का गर्नु पर्छ। यो थकाऊ छ, तर आवश्यक छ ताकि तपाईंको बच्चाले आफ्नो अर्थ बुझ्दछ र वास्तवमा यसलाई आन्तरिक बनाउछ। यदि यो उल्लंघन उल्लङ्घन गर्दछ भने, उदाहरणका लागि, जब अन्य बच्चाहरु संग खेल्दै, तपाईसंग पक्का हुनुपर्दछ। यस अवस्थामा एक उपाय हुन सक्छ कि तपाईंको बच्चाले केही समयका साथीहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले बारम्बार वैकल्पिक अहिंसात्मक व्यवहारलाई बिर्सनु भएको छ र प्रशंसा संग विनम्र, सामाजिक व्यवहार बढाउनु हुन्छ।
पृष्ठ लिइङ टाउन्ड अफ पेसा
हामी किन मसालेदार खानाबाट हिँड्छौं? बच्चाहरु प्रश्न
बच्चाहरु संग पैदल यात्रा